Funda ukukhetha owona mboniso uphambili we-aquariums | Ngeentlanzi
Xa uqala ukusebenzisa i-aquarium yethu kufuneka sazi ukuba kukho izinto ezithile ezibalulekileyo. Enye yazo yi I-aquarium substrate. Ukukhetha le substrate kakuhle kunokuba yenye yeemeko ezifanelekileyo ukuqala ukusebenzisa i-aquarium yethu. Ukuba uqala kweli hlabathi, ngokuqinisekileyo uya kuba namathandabuzo amaninzi. Kwaye kukho iintlobo ezininzi zonyango lwabo kwi-aquariums kwaye nganye ineempawu ezahlukeneyo.
Ke ngoko, siza kulinikela eli nqaku ukuba likuxelele yonke into oyifunayo malunga ne-substrate yee-aquariums kwaye zeziphi ezona zilungileyo kwintengiso.
1 Substrate yee-aquariums
1.1 I-JBL 202120 100 i-Aquabasis Plus i-200-XNUMX
1.3 I-Fluval 12694 yokuTyala kunye neShrimp Substrate
1.4 I-JBL Substrate yee-aquariums iSansibar
1.5 I-JBL ProScape 67080 ye-Aquascaping Plant Umhlaba omdaka
2 Yintoni i-substrate ye-aquariums?
3 Yeyiphi i-aquarium substrate oyikhethayo?
4 Yimalini i-substrate ekufuneka ibekwe kwi-aquarium?
5 Kukangaphi kufuneka uyitshintshe?
6 Ngaba unokongeza i-substrate kwi-aquarium epheleleyo eneentlanzi?
7 Ungayicoca njani i-substrate ye-aquarium
Fluval 12693 Isityebi kwi... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Gqibezela iTetra Substrate,... Bona amanqaku Jonga umnikelo
I-Tetra igcwalise iSubstrate 5 ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Wave uNowa Gravel, 1kg Bona amanqaku Jonga umnikelo
Okona kulungileyo	Fluval 12693 Isityebi kwi...
Umgangatho wexabiso	Gqibezela iTetra Substrate,...
Oyintandokazi yethu	I-Tetra igcwalise iSubstrate 5 ...
iCroci Gravel ye...
Wave uNowa Gravel, 1kg
I-JBL 202120 100 i-Aquabasis Plus i-200-XNUMX
I-JBL i-Aquabasis kunye ne-2,5 L ...
Luhlobo lwe-substrate yee-aquariums ezinesondlo esincedayo izityalo zikhula zisempilweni kuwo wonke ummandla. Iziphumo zokukhula kwezi zityalo zihlala iminyaka emi-5. Le substrate iqulethe izondlo ezibalulekileyo ekukhuleni kwezityalo ezifana nentsimbi nodongwe. Oku kuyenza isebenze ekuvuseleleni ukukhula kwezityalo kunye nokuthintela ukukhula kwe-algae.
Kufuneka ubeke i-substrate yesondlo kwaye uyigubungele ngomaleko we-substrate ehlanjiweyo. Ungayithenga le mveliso ngokunqakraza apha.
Olu luhlobo lwe-substrate yendalo esebenza ukucoca konke ukungcola emanzini. Iyakwazi ukucoca indawo enkulu ye-aquarium ukuphucula umgangatho wamanzi. Ubume bayo buxhasa ukwenziwa kweentsholongwane ezihlambulukileyo ezihlala kulo msebenzi. Ukongeza, iyanceda ukukhula kakuhle kweengcambu zezityalo. Ithintela ukukhula kwe-algae engafunekiyo njengoko ibaleka kwaye ifunxa isichumisi emanzini agqithisileyo.
Ubume beli nxalenye bujikelezwe ukukhusela iibarbels ezibuthathaka zentlanzi esezantsi. Inobungakanani obaneleyo be-aquarium enomthamo weelitha ezingama-50. Ukuba ufuna ukuthenga le substrate ye-aquariums cofa apha.
I-Fluval 12694 yokuTyala kunye neShrimp Substrate
I-Fluval Substrate ye...
Yisiqwenga somhlaba esiqokelelwe kwiinduli zeentaba-mlilo ezineyona mininzi yezimbiwa. Ezi nduli zentaba-mlilo ezifumaneka kwiNtaba iAso eJapan. Yisiqwenga somhlaba esifanelekileyo sokukhuthaza ukukhula kwezityalo zasemanzini kwindawo ezinamanzi amatsha. Esi sixhobo ukuze iingcambu zingene ngokulula kwaye zisasaze kuwo wonke umphezulu we-aquarium ukufumana isixa esikhulu sezondlo eziza kwenza ukuba izityalo zichume. Ukucofa apha ungathenga le mveliso.
I-JBL Substrate yee-aquariums iSansibar
Ngaphandle kokwenza imisebenzi ye-aquarium substrates ikwayinto yokuhombisa. Ingasetyenziswa kwiindawo ezishushu. Olu hlobo lwezixhobo alukhuphi naziphi na izinto eziyityhefu ezivela emanzini ngoko ke zilungele iintlanzi. Ukusetyenziswa kwayo kufuneka kuthintelwe ukuba i-aquarium inayo ucingo lokushushubeza kwezo ntlanzi zentlanzi yetropiki. Kukho iintlanzi ezikweleenjiko ezifuna ubushushu bamanzi obuphezulu kwaye zifuna ucingo lokufudumeza ukonyusa obobushushu. Kule meko, le substrate ayikhuthazwa.
Iqwalaselwa njengenye yeentsebenzo zayo nomhlaba wendalo kunye nobukho bokwenyani kothuli lwenqaku. cofa apha ukuthenga le mveliso.
I-JBL ProScape 67080 ye-Aquascaping Plant Umhlaba omdaka
I-JBL Novopet Proscape ...
Ngenye yezona zinto zincinci zigqityiweyo kwinqanaba lesondlo Izityalo ze-aquarium. Kuyacetyiswa kwezo tanki zinobungakanani be- malunga neesentimitha ezingama-30-40 kwaye banomthamo weelitha ezili-12-25. Inomlinganiselo olungileyo wezondlo kunye neeminerals kwintlanzi nakwizityalo. Ngokunceda ukukhula kwezityalo ze-aquarium, ioksijini efanelekileyo efunekayo inokubonelelwa kwindalo esingqongileyo. Ungacofa apha ukuthenga lo mgaqo.
Yintoni i-substrate ye-aquariums?
I-substrate ye-aquariums yileyo isanti, igrabile okanye izinto eziphilayo ezisetyenziselwa ukubekwa emazantsi eetanki zentlanzi kwaye zinemisebenzi eyahlukeneyo. Enye yazo kukukhuthaza ukukhula kweentsholongwane ezinceda ukugqiba umjikelo wenitrogen. Kuya kufuneka ucinge ukuba i-aquarium ecosystem nayo kufuneka ilawulwe ngandlela thile. Kukho abantu abacinga ukuba i-substrate yeyona ndawo ijolise ekugxileni ukungcola kwi-aquarium. Oku akunjalo. Oko kunokubonakala ngathi ngumthombo wobumdaka kuthi ngumthombo wezondlo kwisityalo.
Yeyiphi i-aquarium substrate oyikhethayo?
Kwimarike sinokubona iintlobo ezahlukeneyo zonyango lwabo, nangona bohlulwe baba ngamaqela amathathu aphambili: i-inert, isondlo kunye nodongwe. Makhe sijonge ngokufutshane ukuba zeziphi ezi zinto zingaphantsi.
Imiyalelo engezantsi: Zizo ezo zenziwe ngumhlaba kunye nesanti kwaye zinobungakanani obahlukeneyo kunye nemibala. Kubalulekile ukuba ulahle loo mihlaba kunye neetrafikhi ezinemibala yokufakelwa njengoko zinokuba neemveliso zetyhefu zentlanzi. Ezi zinto zingaphantsi zinesibonelelo esiphambili sokuba Banefuthe kumgangatho wamanzi kwaye bavumela ulawulo olukhulu kwiiparameter ze-aquarium. Eyona nto iphambili kuyo kukuba awukwazi ukubeka izityalo ze-aquarium ezikhankanywe kwi-substrate ukuze zisinde njengoko zingenazondlo.
Imixube yodongwe: Ezi zinto zingaphantsi zinesixa esikhulu sezondlo ezifana ne-iron, i-aluminium oxide okanye i-magnesium kwaye zikhutshwa yi-aquarium ixesha elininzi. Ikwanakho nokutshintsha ii-ion. Oku kwenza ukuba kube lula kwizityalo ukufunxa ngcono izakhamzimba. Ezona zinto ziluncedo ziphambili kwesi siqendu kukuba iyanceda ukuqinisa amanzi, iphucula ukujikeleza kunye neoksijini, inceda ukubamba iingcambu zezityalo kwaye iququzelele ukubonakala kwebhaktiriya. Eyona nto iphambili kuyo kukuba kudala isiphithiphithi ukuba isiseko sodongwe sihlaziyiwe. Amanzi ngokulula anokuba namafu. Ukongeza, ubukho babo bunokuba nefuthe kwiiparameter ze-aquarium.
Imigca emincinci yesondlo: zezo zinakho ukuguqula iiparameter ze-aquarium kwaye ziqulathe inani elikhulu lezinto eziphilayo. Zisebenza ukubonelela ngezondlo kwizityalo. Xa sisebenzisa olu hlobo lwee-substrates, eyona nto ibalulekileyo kukubeka umaleko wegrabile ngaphezulu.
Yimalini i-substrate ekufuneka ibekwe kwi-aquarium?
Imigangatho emincinci ye-Aquarium ithengiswa ngelitha hayi ngekilo. Ukuze sazi ukuba ungakanani i-substrate oza kuyifaka kwi-aquarium, kufuneka sibala inani leelitha zezinto esiza kuzifuna ngokuxhomekeke kubungakanani betanki leentlanzi.
Kukangaphi kufuneka uyitshintshe?
Kuya kufuneka sifunde ukutshintsha i-substrate xa kukho iimeko ezithile eziyibeka kwimeko. Enye yazo kukuba inkunkuma kunye neitrate ezingaphezulu ziyaqokelela. Enye into kukuba ukuchuma kwe-substrate kuye kwehla. Oku sinokukubona kuphuhliso lwezityalo kunye nokubonakala kwazo. Sinokuba neeparasites ezinkulu kakhulu ezenza ukuba i-substrate kufuneka itshintshwe.
Ngaba unokongeza i-substrate kwi-aquarium epheleleyo eneentlanzi?
Ukongeza i-substrate kwi-aquarium kufuneka ususe amanzi amaninzi kangangoko kunokwenzeka kunye nentlanzi. Kuya kufuneka kwakhona sisuse isihluzi kunye nesifudumezi kwaye sizibeke kwisitya. Kuba siyisusile intlanzi, kufuneka sisebenzise ithuba lokucoca yonke i-aquarium. Nje ukuba sihambise iintlanzi kwakhona kunye ne-aquarium esele icocekile kwaye i-substrate itshintshiwe, akufuneki siphinde sifike kwi-aquarium kwakhona ukuba asilindi iintsuku ezimbalwa. Kungenxa yokuba iintsholongwane kufuneka zibe nexesha lokuphinda zande.
Ungayicoca njani i-substrate ye-aquarium
Ukucoca i-substrate ye-aquarium kufuneka uyitshintshe. Ukwenza oku, siya kuyisusa intlanzi, isihluzo kunye nesifudumezi kwaye sitshintshe i-substrate ngokupheleleyo kodwa hayi amanzi. Amanzi kufuneka kwaye atshintshe phakathi kwe-10-20% veki nganye. Ngale ndlela siqinisekisa ukuba iintsholongwane zinokuphuhla ngcono.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-substrate yee-aquariums.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Substrate yee-aquariums